စာဂခရိုင် တာခဲအို မြို့ မိဖုနဲရာမ ရခုအဲန်း ဆောင်းဦးရွက် ကြွေပွဲတော် | JAPAN DISCOVERY
အစား အသောက် ပိုင်း ဆိုင် ရာ သတင်း အချက် အလက်
မူလနရော » စာဂခရိုင် တာခဲအို မြို့ မိဖုနဲရာမ ရခုအဲန်း ဆောင်းဦးရွက် ကြွေပွဲတော်
Hein Pyae Phyo က အင်ျဂါနေ့, 08/02/2016 - 15:35 အခြိနျတှငျ ရေးခဲ့၏
Select ratingGive စာဂခရိုင် တာခဲအို မြို့ မိဖုနဲရာမ ရခုအဲန်း ဆောင်းဦးရွက် ကြွေပွဲတော် 1/5Give စာဂခရိုင် တာခဲအို မြို့ မိဖုနဲရာမ ရခုအဲန်း ဆောင်းဦးရွက် ကြွေပွဲတော် 2/5Give စာဂခရိုင် တာခဲအို မြို့ မိဖုနဲရာမ ရခုအဲန်း ဆောင်းဦးရွက် ကြွေပွဲတော် 3/5Give စာဂခရိုင် တာခဲအို မြို့ မိဖုနဲရာမ ရခုအဲန်း ဆောင်းဦးရွက် ကြွေပွဲတော် 4/5Give စာဂခရိုင် တာခဲအို မြို့ မိဖုနဲရာမ ရခုအဲန်း ဆောင်းဦးရွက် ကြွေပွဲတော် 5/5
နှစ်စဉ် ၁၁ လပိုင်း ၇ ရက် ကနေ ၁၂ လပိုင်း ၇ ရက် နေ့ ထိ မိဖုနဲရာမ ရခုအဲန်း ရဲ့ ဆောင်ဦး ရွက်ကြွေ ပွဲ တော် ကို ကျင်း ပလေ့ ရှိပါတယ်။ မိဖုနဲ ရခုအဲန်း ဟာ စာဂခရိုင် တာခဲအို မြို့ မှာ တည်ရှိ ပြီး တော့ ရာသီ အလိုက် ရှု ခင်း များ ကို ကြည့် ရှု နိုင် ပါတယ်။ နွေဦး မှာ ဆာကူရာ ၊ နွေမှာ စွတ်စွတ် ဂျိ တို့ က ပွင့် ကြ ပါတယ်။
ကျနော် က ဆောင်း ဦး တုန်း က ဆောင်းဦး ရွက် ညို တို့ ကို ကြည့် ရှု ရန် သွား ခဲ့ ပါတယ်။ ဗဟို ၀င်ပေါက် ကို ၀င် လိုက် တာ နဲ့ ရခု အဲန်း ရဲ့ အတွင်း မှာ ပန်းခြံ ကြီး ကို ထီးထီး ကြိး တွေ့ မြင် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်း ခြံ တွင်း မှာ ရှိ တဲ့ ရေကန် ငယ် လေး ရဲ့ ပတ်ပတ် လည် မှာ တော့ ဆောင်း ဦး ရွက် ညို တို့ ကို အလှ ချယ် ချိတ် ဆွဲ ထား သယောင် တွေ့ မြင် ရမှာ ဖြစ် ပြီး အရွက် တို့ က တစ်ရောင်း ထဲ မဟုတ် ပဲ ၊ အရောင် မျိုး စုံ ပေါင်း စုံ နေတဲ့ အတွက် သဘာ ၀ က ရေး ဆွဲထား တဲ့ လက်ရာမြောက် ပန်းချီကား တစ် ချပ် လို့ ဆို ရင် တောင် မမှား နိုင် ပါဘူး။
အတွင်း ပိုင်း မှာ လူ သွား လမ်း လေး တည် ရှိ ပြီး တော့ အဲ့ ဒီ လမ်း တစ်လျောက် သွား ရင် ဓါတ် ပုံ ရိုက် လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာတွေ အများ ကြီး ရှိ ပါတယ်။ နောက် ပြီး မောလာရင်တော့ အနား မှာ ရှိ တဲ့ လက် ဖက်ရည် ဆိုင် မှာ ထိုင် ရင် ဆောင်း ဦး ရဲ့ အလှ ကို အမြည်းလုပ် ပြီး လက် ဖက်ရည်သောက် လာပါသေးတယ်။ အနား မှာ လက်ဆောင် အရောင်း ဆိုင် များ လည်း ရှိ တဲ့ အတွက် အမျိုး တွေ အတွက် လက် ဆောင် ၀ယ် သွား လို့ လဲ ရပါသေးတယ်။
Takeo Onsen Station
၁၅ မိနစ် ခန့်
"Hein Pyae Phyo"の旅行記
Updated: 2016-10-17 16:47
အိုဆာက က စားကောင်းသောက်ဖွယ်
Select ratingGive အိုဆာက က စားကောင်းသောက်ဖွယ် 1/5Give အိုဆာက က စားကောင်းသောက်ဖွယ် 2/5Give အိုဆာက က စားကောင်းသောက်ဖွယ် 3/5Give အိုဆာက က စားကောင်းသောက်ဖွယ် 4/5Give အိုဆာက က စားကောင်းသောက်ဖွယ် 5/5
Updated: 2016-09-13 16:09
ကျူရှူးပြည်နယ် ၆ရက်မြောက် ခရီး (23 February 2016) by Pakaprich
Select ratingGive ကျူရှူးပြည်နယ် ၆ရက်မြောက် ခရီး (23 February 2016) by Pakaprich 1/5Give ကျူရှူးပြည်နယ် ၆ရက်မြောက် ခရီး (23 February 2016) by Pakaprich 2/5Give ကျူရှူးပြည်နယ် ၆ရက်မြောက် ခရီး (23 February 2016) by Pakaprich 3/5Give ကျူရှူးပြည်နယ် ၆ရက်မြောက် ခရီး (23 February 2016) by Pakaprich 4/5Give ကျူရှူးပြည်နယ် ၆ရက်မြောက် ခရီး (23 February 2016) by Pakaprich 5/5
Updated: 2016-09-12 16:09
ဆာဂမြို့ သို့အလည်တစ်ခေါက် by Por / Saga - Third day
Select ratingGive ဆာဂမြို့ သို့အလည်တစ်ခေါက် by Por / Saga - Third day 1/5Give ဆာဂမြို့ သို့အလည်တစ်ခေါက် by Por / Saga - Third day 2/5Give ဆာဂမြို့ သို့အလည်တစ်ခေါက် by Por / Saga - Third day 3/5Give ဆာဂမြို့ သို့အလည်တစ်ခေါက် by Por / Saga - Third day 4/5Give ဆာဂမြို့ သို့အလည်တစ်ခေါက် by Por / Saga - Third day 5/5
Updated: 2016-09-12 15:10
ဆာဂမြို့ သို့အလည်တစ်ခေါက် ဒုတိယနေ့ by Por / Saga Second Day
Select ratingGive ဆာဂမြို့ သို့အလည်တစ်ခေါက် ဒုတိယနေ့ by Por / Saga Second Day 1/5Give ဆာဂမြို့ သို့အလည်တစ်ခေါက် ဒုတိယနေ့ by Por / Saga Second Day 2/5Give ဆာဂမြို့ သို့အလည်တစ်ခေါက် ဒုတိယနေ့ by Por / Saga Second Day 3/5Give ဆာဂမြို့ သို့အလည်တစ်ခေါက် ဒုတိယနေ့ by Por / Saga Second Day 4/5Give ဆာဂမြို့ သို့အလည်တစ်ခေါက် ဒုတိယနေ့ by Por / Saga Second Day 5/5
Updated: 2016-09-12 14:03
ဆာဂ မြို့ သို့ အလည်တစ်ခေါက် ( ၂၀၁၆.၈လ.၂၂ရက်) by Por
Select ratingGive ဆာဂ မြို့ သို့ အလည်တစ်ခေါက် ( ၂၀၁၆.၈လ.၂၂ရက်) by Por 1/5Give ဆာဂ မြို့ သို့ အလည်တစ်ခေါက် ( ၂၀၁၆.၈လ.၂၂ရက်) by Por 2/5Give ဆာဂ မြို့ သို့ အလည်တစ်ခေါက် ( ၂၀၁၆.၈လ.၂၂ရက်) by Por 3/5Give ဆာဂ မြို့ သို့ အလည်တစ်ခေါက် ( ၂၀၁၆.၈လ.၂၂ရက်) by Por 4/5Give ဆာဂ မြို့ သို့ အလည်တစ်ခေါက် ( ၂၀၁၆.၈လ.၂၂ရက်) by Por 5/5
CANAL CITY HAKATA မှာ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တို့ အတွက် ကဖေး များ နှင့် ဂျပန် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အတွေ့ အကြုံ
ဆာဂခရိုင် သို့ အငှားကားဖြင့် ၃ညအိပ် ၄ရက် အထူးခရီးစဉ်
ဂျပန်ဒစ်စကာဘာရီ က အက်ဒ်မင် စာရေးဆရာ တို့ကအထူးပြု တင်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာ
ဆာဂခရိုင် ခါရာစွတ် မြို့ သို့ နေ့ ခြင်း ပြန် ခရီးစဉ်
ဟိဇဲန်းယူးမဲကိုင်းဒို နင်ဂျာ ရွာ ကလေး ကို သွား ပြီး တစ်ရာက် လောက် နင်ဂျာ လုပ် ကြည့်ရအောင် !
ပွမ်ပွမ် !! နှစ် ထပ် ကား လာ ပြီး ဗျို့ -----